Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Peter Crouch Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara aha na aha njirimara; "RoboCrouch". Anyị Peter Crouch Child Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge.
Nyocha nke onye ọkpụkpọ egwuregwu nke mbụ na-akọwa akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ mmekọrịta ya, omume ya, ndụ ezinụlọ ya na ndị ọzọ na-ewepụ ihe ọmụma banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ngọzi 6'7 nke ikuku mana ole na ole na-atụle akwụkwọ akụkọ Peter Crouch nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị adieu ọzọ, ka anyị bido.
Peter Crouch Child Story - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Peter Crouch mụrụ na ụbọchị 5th nke Jenụwarị 1981 na Macclesfield, United Kingdom. Amuru ya nne ya, Jayne Crouch na nna, Bruce Crouch, ha abụọ bụ ndị Bekee.
Ezinụlọ Peter kwagara Singapore mgbe ọ dị otu afọ. Njegharị ha na Singapore bịara mgbe nna ya, Bruce, sitere na Fulham, weghaara ọrụ ịchọta ọrụ na ụlọ ọrụ mgbasa ozi Singaporean.
Ezinụlọ Crouch nọrọ afọ atọ na Far East wee laghachi England mgbe Bruce jụrụ ohere ịrụ ọrụ na Australia.
Peter toro na nso Wembley. Ọbịbịa ya kpaliri ịhụnanya ya maka football. N'ịtụ egwu ọdịdị nwa ya na ịdị elu ya, Peter malitere dị ka nwa okorobịa. O debanyere aha ya maka ọrụ ụmụ nwoke na-agba bọl na ụlọ ọrụ ụlọ akwụkwọ praịmarị (Roxeth).
Ọ gara n'ihu na ọrụ nwa ya nwoke ka ọ si na Ealing Primary ụlọ akwụkwọ. Nke a na-esote ọrụ dịka nwata nwoke bọọlụ Stamford Bridge. Ndị mụrụ ya mgbe ha bịara ilele egwuregwu Chelsea ga-ahụ nwa ha nwoke ka ọ na-eme ihe ọ maara etu esi eme nke ọma.
Mgbe ọ hụrụ na ogo ya na-eto eto ruru mita isii. Peter onye bụ nwata kachasị elu n'ụlọ akwụkwọ ya kpebiri ịhapụ inye ọrụ bọlbụ ezumike. Ọ sonyeere ndị otu egwuregwu bọọlụ ụlọ akwụkwọ ya. N'oge na-adịghị anya Pita hụrụ nnukwu uru nke ịdị elu ya.
Mgbe o duchara ndị otu ụlọ akwụkwọ ya n'ọtụtụ isi mmeri mmeri, Peter kpebiri ịmalite ọrụ ntorobịa na mpụga ụlọ akwụkwọ na Northolt Hotspurs.
O mechara sonye na Brentford Center nke Ọkachamara na 1991 wee soro QPR (1994 - 1995). N'okpuru ebe a bụ foto ntorobịa ya.
Peter malitere ọrụ ntorobịa ikpeazụ ya na Tottenham Hotspurs na 1995. Ọ malitere ọrụ aka ya na 1998. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Ọnye na-bụ Abigail Marie Clancy? Nwunye Peter Crouch:
Peter ama ọsọn̄ọ ndọ ke ofụri eyouwem esie, idịghe ke isua 2006 ke ini enye ekenyenede ima Abigail Marie Clancy emi ẹwụtde ke idak.
Peter dị afọ 5 karịa Abbey dịka a na-akpọ ya. Ọ bụ nwanyị na-eji ejiji bekee, ụdị catwalk na onye na-egosi telivishọn. Ọ bụ onye na-agba ọsọ nke Britain's Next Top Model (nke abụọ) ma merie usoro 2 nke Strotely Come Dancing na 11.
Di na nwunye ahụ kwere nkwa na July 2009 na ada ha nwanyị bụ Sophia Ruby mụrụ na 14th ụbọchị Machị 2011. N'okpuru ebe a bụ foto nke obere Sophia na papa ya.
Na 30 June 2011, Clancy na Crouch lụrụ na Stapleford Park Hotel na Leicestershire. Nke a bụ Foto agbamakwụkwọ Peter Crouch.
Nwa ha nwanyị nke abụọ bụ Liberty Rose mụrụ na 1 June 2015. ọ ka bụ ezinụlọ mbụ maka Crouch na Abbey.
Ezinụlọ Peter Crouch.
Nwanne Abbey bụ Sean bụ onye egwuregwu bọọlụ na-agbara AFC Telford United ugwu. Ọ bụkwa onye nkedo nke usoro E4 dị mkpụmkpụ Ndị Scousewives. Nwa nwanne ya nwoke bụ Jọn bụ onye na-abụ abụ na onye na-agụ ụda egwú na ìgwè ndị India JUDAS.
Peter Crouch Biography Eziokwu - Ikwu aghụghọ:
Abbey echewo ihu na ala nke ndụ dị ka WAG ebe ọ bụ na ọ malitere ịlụ Pita na 2006.
E boro nwoke 6ft 7in England ebubo na ọ ghọgburu nwunye ya Abbey. Nke a mere mgbe ọ tụrụ ime nwa mbụ ha, Sophia, na 2010.
Abbey Clancy na-ekwenye na ọ bụ eziokwu na Peter Crouch boro ebubo na ọ na-agba akwụkwọ na onye ọrụ azụmahịa 19 afọ a na-akpọ Monica.
Ogbenye Peter, na-enwe mwute maka onwe ya.
Mgbe o kwenyesiri ike na ihe na-emegharị anya, onye a mụrụ na Liverpool kwuru n'ụzọ dị mwute: "Ọ bụ ihe jọgburu onwe ya. Maka nwanyị ọ bụla dị ime ma ọ bụ mụọ nwa, ọ siri ike. " Pita nwere obi nkoropụ mgbe o kwere ka ọrụ ya belata aha ya ma wute nwunye ya.
O mere ihe maka mmejọ ya ma gbaghara nwunye ya. Mana o kwuru na ya na Pita etinyewo ihe omume ahụ n'azụ ha, na-akọwa ya dị ka "Otu n'ime ihe ndị ahụ".
Abbey kwukwara: "Ọ bụ ezigbo enyi m. Ọ na-eme ka m chịrị ọchị - ọ dị obiọma, mmesapụ aka na nna dị egwu. Enwere m obi ụtọ maka ya. "
Peter Crouch Ezinụlọ:
Ezinụlọ Crouch bụ ndị na-akwado Chelsea. Papa ya debara aha nwa ya nwoke dị ka nwa na-eto eto na Stamford Bridge mgbe ọ dị afọ iri. Ma nne na nna Peter Crouch gara Stamford Bridge iji lee egwuregwu Chelsea.
Ọtụtụ afọ gara aga, nne na nna Peter Crouch hapụrụ 'ụjọ' mgbe otu ìgwè adaka ọhịa bara n'ime ụlọ nkwari akụ ha na Sun City Resort dị nso n'ogige ọzụzụ England na Rustenburg.
Imehie ụmụ akwụkwọ nke ichefu imechi windo ụlọ ha tupu ha ahapụ, Bruce na Jayne Crouch laghachiri na njem iji chọpụta ndị agụụ agụụ na-agụ na njem iji tọhapụ nri ha dị ụtọ.
Dị ka nwunye nwunye Crouch si kwuo Abbey:
“Ha nọ n’ime ụlọ nkwari akụ ha mgbe adaka atọ a batara, jiri ụkwụ gafere n’ime ụlọ ihi ụra baa n’ime ime ụlọ ahụ, were ihe ha chọrọ pụọ. Ọ dị ka ha maara ebe mkpụrụ osisi ahụ dị. ”
Peter Crouch aha otutu:
Ọ bụ ezie na a maara dị ka "Crouchy," aha njirimara ndị ọzọ enyeworo ya site na Fans na mgbasa ozi na England gụnyere "RoboCrouch" na "Crouchinho" nke ndi Brazil jiri.
Dị ka Crouchinho, Peter O zoro aka na ya “Maazị Roboto ” site na ndi nkowa Univision na dika "Pantera Rosa" by Egwuregwu Fox Ndị ọkà mmụta Spanish.
Peter Crouch Robotic cinggba egwú:
N'oge ọkọchị nke 2006, Crouch nakweere mgbatị mgbaru ọsọ ịgba egwu robotic. A hụrụ egwu nke ịgba egwu ka ọ na-eme ihe omume telivishọn na-ekpuchi oriri na nkwari na England onye otu David Beckham.
O bu ụzọ mee ya mgbe ihe mgbaru ọsọ ya maka England megide Hungary na 30 May. Ọ na-agba egwú ọzọ ma ọ bụrụ na ihe mgbaru ọsọ abụọ mbụ ya megide Jamaica na 3 June.
The Oyiyo ubochi Akwụkwọ akụkọ dere na abụ sitere n'ike mmụọ nsọ sitere na abụ ndị a na-akpọ 'Arctic Monkeys' “Ekwere m na ị dị mma na ebe a na-egwu egwu”.
Na 12 June, Crouch kwupụtara na ya ga-emegharị egwú robotic ọzọ ma ọ bụrụ na England ga-emeri iko ụwa, na-asị, “Ọ bụghị maka okwu robotic. Ọ bụ banyere ịme ihe mgbaru ọsọ na imeri egwuregwu. Ọ bụ oge dị mkpa maka mmadụ niile ugbu a. ”
Na September 2006, e hotara ya Onye Na - ahụ akwụkwọ akụkọ na-ekwu na, “Ọ bụ ihe ọchị n'oge ahụ, mana achọghị m ịga n'ihu na-eme ya ruo mgbe ọ bịara unfunny. Akwụsịrị m ime ya maka oge a, mana ọ bụrụ na etinyere m nnukwu ihe mgbaru ọsọ ị maghị. ”
Na 6 August 2007, Crouch kwuru na ya agaghị eji robot agba egwu ọzọ ọ gwụla ma ọ gafere na UEFA Champions League Final, mana ọ deghachiri ya na 1 April 2009 mgbe ọ gbasịrị mgbe England na-eru eru egwuregwu megide Ukraine mgbe ihe osise Comic Relief gasịrị.
Na 1 February 2017, Crouch nyere agba egwu nke ikpeazụ iji mee ememme 100th Premier League. Na mgbakwunye na Robotic, Peter emeela egwu ole na ole dị ka a hụrụ n'okpuru.
Okwu Drikwọ :gbọala:
Na August 2012, a mara Crouch ikpe na-agba ọsọ na November 2011 wee nye iwu ịkwụ ụgwọ nke £ 1,000. Na 16 October 2012, a napụrụ ikike ịkwọ ụgbọala maka ọnwa isii.
Ọtụtụ ihe mgbaru ọsọ
Crouch bụ otu n'ime ndị egwuregwu iri abụọ na isii nwere ihe mgbaru ọsọ 26 ma ọ bụ karịa na Premier League, na-ejide ndekọ maka isi ihe mgbaru ọsọ kachasị na Premier League. O weputara akwukwo nke onwe ya na 100, nke edeputara 'Ije ije ogologo - akụkọ m '.
Peter Crouch Ndụ Nke Onwe:
Peter Crouch bụ Ọrịa cancer na nwere àgwà ndị na-esonụ ka àgwà ya;
Peter Crouch ike: Ikike, ịdọ aka ná ntị, njide onwe onye, ​​ezigbo ndị nlekọta.
Nrụrụ aka Pita Crouch: Mara ya nile, na-enweghị mgbaghara, na-emetụ onwe ya ala, na-atụ anya ihe kacha njọ.
Ihe Pita Crouch nwere mmasị: Ezinụlọ, ọdịnala, egwu, ọnọdụ a kwadoro, ịrụ ọrụ mma.
Ihe nchịkọta Pita adịghị amasị: Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla. O nwere nsogbu dị egwu.
Nsogbu Peter Crouch nke ịbụ oke ogologo: Nsogbu na ịbụ 6ft 7in ogologo, dịka Crouch ga-ekwu mgbe nile, bụ na ọ gaghị ekwe omume ịbụ onye a na-amaghị aha
Daalụ maka ịgụ Peter Crouch Nwatakiri Akuko na akuko ihe omuma. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!
Bọchị gbanwee: Eprel 25, 2021